AboHlanga abagcwele emijondolo bathwele inhlupheko - Bayede News
Ngeledlule elaboHlanga libike ngoMnu uJames “Sofasonke”Mpanza isenzo sakhe esazala imijondolo eyagcina isabalele yaba iSoweto. Lesi senzo esasisihle sesaba yisithombe sosizi kwaboHlanga ngenxa yezimo asebephila ngaphansi kwazo. Kuningi ukukhuluma okukhona mayelana namalokishi kodwa ihlazo eligqitshwayo noma elingakhulunywa ngokuphelele uma kukhulunywa ngalezi zindawo ukuthi imijondolo iyona esiminingi ukwedlula izindlu emalokishini futhi iyanda kanti isiqala nokungena nasezindaweni zezinye izinhlanga okugcina kudala izingxabano. Kwamanye amalokishi uma kungathiwa makuvotwe phakathi kwabanezindlu kanye nabahlala emijondolo, iqiniso lithi sekunganqoba labo abahlala emijondolo. Ukuba khona kwemijondolo eminingi kuyashaqisa kodwa okudumaza kakhulu ukuthi ngaboHlanga abahlala kuyona futhi babhekana nosizi nsuku zaphuma. Lolu sizi lwagcina seluholele ekusungulweni kwenhlangano elwela amalungelo abahlala emijondolo ebizwa ngaBahlali Basemjondolo ecishe ifane naleyo kaMnu uSofasonke eyayibizwa ngeSofasonke Party.
Izibalo zabantu emalokishini ziphezulu kakhulu kodwa okufanele kubukisiswe ngukuthi uma kubalwa izakhamuzi zakulezi zindawo kuhlanganiswa nalezi ezihlala emijondolo esuke izungeze lelo lokishi. Izibalo zezakhamuzi zasemjondolo ziyakhula nsuku zonke okuchaza ukuthi nezinkinga zabo ziyanda. Okuliqiniso ngale mijondolo ukuthi isuke ihlelwe noma ibekwe ezindaweni okungezikamasipala okuchaza ukuthi abahlala kuyona bakwenza ngokungemthetho okugcina sekuholela ekugquzulaneni kwezakhamuzi namaphoyisa uma ezama ukuzisusa. AboHlanga abahlala kulezi ndawo bazithola sebedilizelwa imijondolo yabo umasipala ngenxa yokuthi abanalo igunya lokuhlala lapho futhi umkhandlu usuke ubeke lezi zindawo njengalezo ezibizwa ngamaGreen Areas. ElaboHlanga likhulume nesakhamuzi saKwaMashu esicele ligodlwe igama laso esithe: “Ngihlala eSiyanda KwaMashu, ekhaya asinayo indlu yomxhaso kaHulumeni sihlala emjondolo. Amanzi nogesi asinakho kodwa kule ndawo engihlala kuyona bakhona abanakho abakuthola ngomkhonyovu njengokufaka amapayipi nezintambo zikagesi ezingagunyaziwe umasipala ngoba phela ngeke sihlale sisonge izandla singenazo izidingo eziyisisekelo silinde uHulumeni.
Usizi luyaqhubeka kubafundi boHlanga eminyakeni engama-24
Kuyimanje wasithembisa izindlu namathuba emisebenzi kodwa azikho izethembiso ezifezekile.” Sibuzwa ngesimo sezidakamizwa nokuphepha endaweni sithe: “Ukusetshenziswa kwezidakamizwa lapha kuphezulu, kuyimanje sinenkinga uma isigebengu sibanjwe sintshontshile siboshwa ekuseni kodwa ntambama uphambana naso lapha endaweni kusobala ukuthi abukho ubugebengu obuzophela.” Kuphinde kwakhulunywa nesinye saseJadhu Place Informal Settlement eSpringfi eld naso esicele ukungadalulwa esithe: “Kuyinkinga ukufi nyelela kukagesi lapha ngoba ngisho isikhishiwe imali yalowo msebenzi iyadliwa, kunzima nokulandwa kwemfucuza ngoba asinayo imigwaqo yokuhamba izimoto eziyilandayo okugcina sekuholela ekwandeni kwezifo ngenxa kadoti ongaqoqwa.” Naso sikhale ngokwesweleka kwemisebenzi esithe kuholela ekusebenziseni izidakamizwa ngenxa yengcindezi. “Ngalokhu umuntu usuke ezama ukukhohlwa usizi abhekene nalo endlini, ugcina usungena ebugebengwini ukuze uthole imali yokuthenga isidakamizwa. Iqiniso lithi uma kukhona odayisa izidakamizwa ubulala izwe kodwa usuke naye ezama imali yokuziphilisa ngoba indlala akuyona into yokudlala ukube ayikho ngabe nezidakamizawa azikho.
“Uma sekukhulunywa ngezethembiso usuke udlalile ngathi kuyimanje uHulumeni wasethembisa imisebenzi kodwa sagcina singayitholanga ngenxa yemikhonyovu yokudayiswa kwezikhala zomsebenzi. Thina esingenamali sizokwenzenjani? Okubuhlungu ukuthi ngaboHlanga abenza lokhu,” kusho lesi sakhamuzi. Imikhonyovu okuthiwa yenziwa ngabahlali basemijondolo ngezinye zezinto ezigcina seziholela engxabanweni phakathi kwabo nabahlala ezindlini. Ingxabano ivela kakhulu uma kunezinkulumo ezithi ukucisha kukagesi emalokishini kudalwa ukwanda “kwezinyokanyoka” (abaxhuma izintambo zikagesi ngomgunyathi). Ubufakazi balokhu yisigameko sangowezi-2016 lapho abahlali baseMayville babhikishela lokhu okuthiwa kwenziwa ngabahlali basemijondolo. Izimo aboHlanga abahlala ngaphansi kwazo ezindaweni zasemijondolo zigcina sezibaphoqa ukuba bafake impilo yabo engcupheni ngenxa yokufuna izidingo eziyisisekelo. Isithombe semijondolo siyethusa kakhulu ngoba leli zwe lineminyaka engama-26 lathola inkululeko kodwa aboHlanga namanje basacindezeleka ngisho sekuphethe uHulumeni wentando yabantu. Okubonakalayo ukuthi amaqembu epolitiki abona abahlali basemijondolo njengamabhange amavoti okuthi uma sekuzovotwa aphume engena kulezi zindawo kodwa emuva kokhetho awabonwa nangokhalo.